वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको उद्योगीको गुनासो - Karobar National Economic Daily
वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको उद्योगीको गुनासो
query_builderMarch 19, 2017 1:44 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility175
वीरगन्जले कुल राजस्वको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ । नेपालको दोस्रो ठूलो औद्योगिक करिडोर र आर्थिक कारोबार हुने वीरगन्जलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।
टीबीआई पब्लिकेसन्स प्रालिले गरेको ‘वीरगन्जको बृहत्तर विकास र यसको सम्भावना’ विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले वीरगन्जलाई राज्यले दोहन गर्ने माध्यम मात्र बनाउने गरेको बताएका हुन् । उनीहरूले वीरगन्जको महत्वलाई बुझ्न सक्ने राज्यको नीति आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलका क्रममा टीबीआई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शिशीर भट्टले टीबीआई पब्लिकेसन्सले सुरु गरेको पत्रकारिता आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भएकाले नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयनको पक्षमा पैरवी गर्ने बताए ।
देशको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको वीरगन्जको बृहत्तर विकासका लागि टीबीआई समूहले सहकार्य गर्ने भन्दै उनले वीरगन्ज र वरपरका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन र समृद्धिका लागि कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले महत्वपूर्ण स्थान दिने धारणा राखे । कारोबार टिम– उद्योगी व्यवसायीबीचको छलफलमा सहभागीहरूले राखेका धारणा :
भगवानको भरोसामा उद्योग व्यवसाय
अध्यक्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको निजीक्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधिहरू प्रकाशन गर्ने आर्थिक पत्रिकाहरूले परिणामुखी समाचारलाई स्थान दिन सकेका छैनन् ।
यहाँका उद्योग व्यवसाय भगवान भरोसामा चलेको छ । देशमा आर्थिक तरलताको अभाव राजनीतिक अस्थिरताका कारणले भएको छ । जसले सरकारको चाकडी ग¥यो त्यसैलाई मात्र हेर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकहरूको दादागिरीका कारण पनि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन् ।
बैंकका कर्मचारीहरूले ग्राहकहरूसँग राम्रो व्यवहार नगरेको र व्यवसायीलाई दुःख दिने गरिएको छ । वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको विचार, प्रतिक्रिया, सुझावहरू कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले समेट्नुपर्छ ।
वीरगन्जको महत्व बुझाउनुपर्छ
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
काठमाडौंमा बस्नेहरूले वीरगन्ज पनि नेपालमै छ भन्ने बुझेका छैनन् । त्यो बुझ्न जरुरी छ र बुझाउन पनि जरुरी छ । वीरगन्ज नेपालको एउटा हिस्सा हो ।
त्यसलाई राजस्व आउने स्रोत मात्र बनाउने होइन यसको विकासका लागि पनि सोच्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमहरू पनि वीरगन्जको विकासका लागि सहयोगी भूमिकामा रहन आवश्यक छ । त्यसका लागि यहाँका महत्वपूर्ण समाचारहरू कमसेकम आइरह्यो भने वीरगन्जको महत्व बढ्न सक्छ ।
जुन पत्रिकाले यहाँ भएका परिवर्तन, विकासका समाचारहरू लेख्छन् । त्यस्ता पत्रिका पक्कै पनि हाम्रो लागि सहयोगी हुनेछ । त्यस्ता समाचार छापिएका पत्रिकाहरूको सर्कुलेसन पनि बढाउनुपर्छ ।
व्यापारी र सञ्चारमाध्यमबीच दूरी बढ्यो
महासचिव , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालको पत्रकारिता, पहिले र अहिले फरक देखिएको छ । व्यापारी र सञ्चार माध्यमको दूरी बढेको देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूको नकारात्मक समाचार मात्र बढी लेखिदिने गरेका कारणले पनि दूरी बढेको हो ।
सञ्चारमाध्यम व्यापार प्रवद्र्धनको मुख्य माध्यम भए पनि यसबाट व्यापारीहरू भागिरहेका हुन्छन् । यस्तो हुन नदिन व्यापारी र सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ ।
व्यापारीहरू सञ्चार माध्यमसँग किन टाढा हुन्छन् भन्ने कुराको मिडिया हाउसले पनि खोजी गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गरी समाधान गर्नेतर्फ लाग्दा सम्बन्धमा सुधार पक्कै आउँछ ।
सकारात्मक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
पूर्वअध्यक्ष , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि निर्माण भएका नीतिहरू अस्पष्ट छन् । त्यसको सुधारका लागि कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।
आर्थिक विषयमा केन्द्रित कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले वीरगन्जको समस्यालाई मुख्य समाचार बनाउनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा वीरगन्जको नकारात्मक समाचारहरूले मात्र स्थान पाउने गरेको छ । सकारात्मक कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । सम्भावना बोकेको वीरगन्ज क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राज्यले केही पनि दिएको छैन ।
सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन तथा सभा सम्मेलनहरू वीरगन्जमा गर्छन् । तर, यहाँको विकासका लागि भने केही सोचेका छैनन् । यस विषयमा पनि पत्रिकाले केही विषयहरूको उठान गर्नुपर्छ ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्य
कार्यकारिणी सदस्य , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी भएको छ । दक्षिण एसियमा बंगलादेशले लिएको आर्थिक नीति निकै सकारात्मक देखिन्छ । नेपालले पनि त्यस्तै अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेमा विश्वमा विकसित राष्ट्रहरूबाट लगानी भिœयाउन सकिने सम्भावना छ ।
बंगलादेशमा पनि राजनीति अस्थिरता त छ । तर, त्यहाँको आर्थिक नीतिकै कारण अहिले वैदेशिक लगानी त्यहाँ बढेको छ । त्यस्तो सम्भावनाहरू नेपालमा छ कि छैन ? त्यसबारेमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकमार्फत सरकारलाई झकझकाउन जरुरी छ । नेपाल–भारतको रेल्वे बैठक ६–६ महिनामा हुनुपर्ने अहिलेसम्म त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।
सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । निजी क्षेत्रहरूसँग सरकारले राजस्व मात्र आशा गर्छन् । वार्षिक राजस्व बढे पनि सरकारको निजी क्षेत्रप्रति भरोसा छैन ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूमा राजनीतिक नियुक्ति बढी हुने गरेको छ । त्यसले पनि औद्योगिक उत्पादन र बजारमा फरक पारेको छ । राजनीतिक मुद्दाहरूकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरू पीडित छन् ।
निजी क्षेत्रबारे बोलिदिने राजनीतिक नेतृत्व भएन
वीरगन्जलाई राजनीतिक दलहरूले दुहुनो गाई बनाएको छ । मुलुककै राजस्व संकलन गर्ने स्थानलाई आन्दोलनको थलो बनाए । निजीक्षेत्रको नेतृत्व गरेर बोलिदिने कुनै नेता भएनन् ।
व्यापारिक नाका भए पनि यसको महत्वलाई न त राज्यले बुझ्न सक्यो, न त राजनीतिक दलहरूले नै, उद्योगी व्यापारीहरूले के हेर्छन् भने जहाँ लागत कम हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्न खोजेका हुन्छन् । यहाँ त्यस्तो सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि लगानीहरू पूर्व–पश्चिममा बढेको छ । यसमा राज्य उदासीन छ ।
केन्द्रमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यस विषयमा गम्भीर देखिँदैनन् । धरातलीय यथार्थ के हो ? भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यस विषयमा आर्थिक मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिने पत्रिकाले पनि बढी महत्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक
निवर्तमान अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
निर्णायक तहमा बसेकाहरूको केही दीर्घकालीन सोच हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रहरूका अनुभवहरू धेरै भए पनि निर्णायक तहसम्म हामी पुग्न सकेका छैनांै ।
समाचारहरू धेरै आउँछन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या, उनीहरूले भोग्नुपरेका दुःख तथा अन्य विषयहरूमा पनि धेरै समाचार आउँछन् । तर, परिणामुखी समाचार कम आएका छन् । त्यसको निरन्तर फलोअप हुन जरुरी छ । आर्थिक कारोबार बढी हुने वीरगन्जको राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा स्थान नपाउँदा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि वीरगन्जको विकासमा प्रभाव पारेको छ । यहाँबाट एउटा प्रस्तावना काठमाडौं जान्छ । त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू परिवर्तन भइहाल्छ । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रबाट पनि पीडित भयौं
उद्योगी , क्याल समूह
वीरगन्जको विकासका लागि सरकारको लगानी शून्य छ । केहीमा पनि आशा लाग्दो लगानी सरकारको देखिँदैन । राजनीतिक दलका नेताले पनि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीलाई दुहुनु गाईको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सञ्चारक्षेत्रबाट पनि पीडित नै भएका छौं । राम्रो स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि भरोसा गर्न सकिने खालको छैन । यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यमले पनि खासै लेख्ने गरेको पाइँदैन । सरकारी कर्मचारीहरू पनि आकर्षक कार्यालयहरू खोजेर वीरगन्जलाई नै रोज्ने गरेका छन् ।
वीरगन्जमा मुद्दा केन्द्रमै स्थापित हुनुपर्छ
उपाध्यक्ष , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वीरगन्जका मुद्दाहरू धेरै छन् । यसलाई सार्वजनिक गर्ने र केन्द्रसम्म स्थापित गरेर यसको समाधान गर्न पहल गर्न जरुरी छ । हाम्रा मुद्दाहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याएर दबाब स्वरूप लानुपर्छ, संस्थागत रूपमा नै लाग्नुपर्छ ।
दैनिक कार्गोहरू आइरहेकै छन् । तर, भन्सार राजस्व संकलन कमीका कुराहरू मात्र समाचारमा आउँछन् । वीरगन्जमा धेरै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । त्यसको अद्यावधिक प्रगति विवरण सहितको समाचारलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारी कर्मचारीबाटै पीडित भयौं
अनिल अग्रवाल, उद्योगी
उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारी कर्मचारीबाट पीडित हुने गरेका छन् । विशेष गरी राजस्व, उद्योग तथा अन्य सरोकार राख्ने कार्यालयका कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसरी पेलेर लान सकिन्छ भन्ने सोच राखेका हुन्छन् ।
उद्योग व्यवसायसँग सरोकार राख्ने कार्यालयहरू व्यवसायी मैत्री बन्न सकेको छैन । देशका जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खराब देख्ने राज्यको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन । व्यापारीहरूले घाटा सहेर पनि राजस्व बुझाएकै हुन्छन् । त्यसैले यस्ता कुराहरूको समाधानका लागि व्यवसायी र सञ्चार क्षेत्रको समन्वय हुन जरुरी छ ।
जनचेतना बढाउन आवश्यक छ
सह–सचिव , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
औद्योगिक लगानीको सुरक्षाका विषयमा समाचारहरू कम आउने गरेको छ । यस विषयमा विस्तृत विवरण सहितका समाचार आउन सकेमा उद्योगी व्यवसायीलाई सुरक्षण लगानीका बारेमा जानकारी हुनसक्छ ।
उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो सन्तानको भविष्यका लागि पनि लगानी गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । तर, लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । हामीले दुरगामी फाइदा र लगानी सुरक्षाको विषयमा जनचेतना जगाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्छ ।
टीबीआई समूह र वीरगन्जका उद्योगीबीच सहकार्य गरौं
कुनै पनि विकासका लागि मुख्य भूमिका भनेको सञ्चार क्षेत्रकै हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रले विकास र परिवर्तनका समाचारलाई निरन्तर प्रकाशन र प्रसारण गर्दै गयो भने त्यस ठाउँको विकासको गतिले पनि तीव्रता पाउने कुरा ध्रुव सत्य भएकाले पनि अब वीरगन्जको विकासका लागि टीबीआई समूह र वीरगन्जका उद्योगीहरूले पनि सहकार्य गरेर वीरगन्जमै पनि ठूला मिडिया हाउस खोल्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ ।
देश संघीयताको संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अब प्रदेश नम्बर २ मा खोलिने ठूला मिडिया हाउसले पक्कै पनि वीरगन्जको विकासका लागि सकारात्मक योगदान दिन सक्छन् ।
प्रस्तुति : नीरज पिठाकोटे मगर